Daraasadeynta 2020 ee Qorshaha Jidadka Lugeynta Gobolka oo dhan
Sannadkii 2019, waaxda gaadiidka ee MnDOT waxay dadka Minnesota weydiisay sida loo horumarin karo loona goyn karo dariiqyada lugeynta iyo noocyada jidadka lugta ku habboon. Hadda waxaan rabnaa in ay dadweynuhu nooga jawaabaan lugeynta iyo dhaafidda jidadka meelo badan oo kala duwan oo ka mid ah Minnesota, oo habka looga jawaabayo waa sawirro aad hoos ku arki doonto. Inta badan sawirrada daraasaddan waxa aad ku arkeyso waa dad ku sugan xilliga xagaaga ah ee kuleylaha. Hase yeeshee, talooyinka qorshaha waxaa ka mid noqon doona dayactirka, naqshadeynta, iyo siyaabaha kale ee loo badin karo lugeynta xilliga barafka iyo bilaha qaboobaha ah ee uu jiro mugdiga.
Dariiqyada Lugeynta ee Deegaankaaga
Fadlan calaamadi dariiqyada lugeynta nooca u dhow deegaanka aad maalin kasta ku sugan tahay ee aad adigu ka jawaabi karto. Hoos ka eego jawaabo badan oo aad kala dooran karto. *
Small Town Center/Urban Downtown
Sidee buu badqabkaagu noqon karaa markaad ku lugeyneyso jidka ka dhex muuqda sawirka? (1 ilaa 5 ku cabbir 1: badqabid la'aan ilaa 5: badqabid aad u fiican)
badqabid la'aan ilaa badqabid aad u fiican
1 is badqabid la'aan ilaa, 5 is badqabid aad u fiican
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Magaalo Yar Bartankeed/Deegaan Magaalo Bartankiis.
Dariiqyada Deegaanka Magaalada
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Deegaan Magaalooyin isku mid ah?
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Goobaha Warshadaha?
Goobaha Ganacsiga Bannaanka Magaalada
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Goobaha Ganacsiga Bannaanka Magaalada?
Goobaha Deegaanka Bannaanka Magaalada
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo dariiqyada Deegaanka Bannaanka Magaalada?
Jidadka Isku-xira Magaalooyinka Miyiga
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Jidadka Isku-xira Magaalooyinka Miyiga?
Faallo ama fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa marka lagu dhex lugeynayo Jidadka Duurduurka?
Jidadka meelaha ay dadku ka gooyaan
Markaad ka fekarto dadka oo dhan, sawirrada hoose midkee baa muujinaya isgoys ama meelaha kale ee dadku jidka ka gooyo ee aad ka filan karto in aad ku badqabto marka aad dariiqa goyneyso? Fadlan calaamadi illaa SADDEX (3) sawir. *
Nala Wadaag Fikradahaaga
Maxay tahay macnaha ay kuu leeyihiin meelaha jidka laga gooyo/badqabidda lugeynta? *
Tusaaleyaasha muuqda waa muddo gaaban, kharash yar, qiime jaban, dhismeyaal jidad ku meelgaar ah oo lagu hagaajinayo jidadka la goynayo. Mashruucyo badan ayaa noqon kara tusaaleyaal muuqda, sida calaamado jidadka lagu gooyo, kaabadaha istaagidda oo kor loo dheereeyo, iyo jidka bartamihiisa meelo lagu badbaado jidadka laba seed ah. Isbeddellada mustaqbalka fog waxay u muuqan doonaan sida kaaga muuqata sawirrada kore oo aad ayaa loo sii tayeyn doonaa, sida kaabadaha dhinacyada jidka oo shub adag lagu dhiso. Mustaqbalka dhow, tusaaleyaasha muuqda waa qiime jaban oo si sahlan oo dhakhso leh loo diyaarin karo si loogu hagaajiyo jidadka iyo/ama isgoysyada.
Qof jid goynaya oo ay ka muuqato tusaale ah kaabad dheer oo la dhisay
Dad baaskiil wata oo ay ka muuqato tusaale ah kaabad dheer in la dhisay
Fadlan calaamadi sida aad u taageersan tahay tusaaleyaasha muuqda:(1 ilaa 5 ku cabbir 1: Kuma taageerayo deegaankeyga tusaaleyaal muuqda – ilaa 5: Waxaan deegaankeyga si buuxda ugu taageerayaa tusaaleyaal muuqda *
Kuma taageerayo deegaankeyga tusaaleyaal muuqda – ilaa Waxaan deegaankeyga si buuxda ugu taageerayaa tusaaleyaal muuqda
1 is Kuma taageerayo deegaankeyga tusaaleyaal muuqda – ilaa, 5 is Waxaan deegaankeyga si buuxda ugu taageerayaa tusaaleyaal muuqda
Jawaabaha qof kasta ee su'aalaha soo socda waxa ay naga caawin doonaan inaan ku fahamno bal in ay dadka oo dhan ka soo jeedaan dadweynaha kala duwan ee ku wada nool Minnesota.
1. Waa maxay lambarka boostada deegaankaaga (zip-code)?
Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
2. Immisa jir ayaad tahay?
14 ama da' ka yar 15 ilaa 24 25 ilaa 44 45 ilaa 64 65 ilaa 84 85 iyo da' ka weyn Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
3. Jinsigee ayaad isu aqoonsan tahay inaad ka soo jeeddo?
Dheddig Lab Jinsiyada midkoodna / habdhaqan xorriyad jinsi Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
4. Waa immisa dakhliga qoyskaaga? (Dakhliga isku-darka ah ee qof kasta oo ka tirsan qoyska oo ka weyn 15 jir oo shaqeysta)
In ka yar $25,000 $25,000 ilaa $34,999 $35,000 ilaa $49,999 $50,000 ilaa $74,999 $75,000 ilaa $99,999 $100,000 ilaa $149,999 $150,000 ama in ka badan Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
5. Immisa qof ayaa ku nool gurigaaga/hoyga qoyskaaga?
Qofna, keligay ayaa ku nool Hal qof (1) Laba qof (2) Saddex qof (3) Afar qof (4) Shan qof (5) ama dad ka badan Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
6. Isirkee ayaad isu aqoonsan tahay inaad ka soo jeeddo? Calaamadi jawaabaha ku khuseeya oo dhan.
Hindida Mareykanka ama Dhaladka Alaska Aasiyaan Madow/Afrikaanka Mareykanka Xisbaanig/Laatiino/Isbaanish Dhaladka Haawaay/Jasiiradaha Kale ee Baasifigga Caddaan/Dadka Yurub Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin
7. Naafo miyaad tahay?
Haa (dhaqaaqidda jirkayga) Haa (aragtida indhahayga) Haa (maqalka dhagahayga) Haa (xagga garaadka ama caqliga) Haa (wax kale) Maya Waxaan doorbidayaa inaanan ka jawaabin